नेपाली मनहरू nepalimanharu.com (शिव प्रकाश ): प्लेनको ढोका ड्याङ् ड्याङ्
प्लेनको ढोका ड्याङ् ड्याङ्
शिव एकजना पछाडिबाट पेल्दै आए अर्का मभन्दा अगाडी धुस्रिए । झनक्क रिस पनि उठ्यो तर रिसाएर के गर्नु आइलाग्नन् भन्ने डर ! तीन महिना यो मातृभूमि नेपाल बस्दा मलाई थाह भै सकेको थियो कि "नियम कानुन मान्नु र अनुशासनमा बस्नु भनेको सानु हुनु हो र नमान्नु र अनुशासनहिन हुनु भनेको ठूलो हुनु हो, मान्ने गन्ने हुनु हो" भन्ने कुरो । यही कुरो सम्झिएर आफू सानु हुदै भने भाइहरु विदेश जाँदै हुनुहुन्छ तर विदेशमा यसरी लाइनमा बसेको मान्छेलाई ठेल्नु हुदैन, छुनु पनि हुदैन खासमा भन्ने हो भने एक हात अघि वा पछि बस्नु पर्छ अनि कहिल्यै पनि लाइन मिच्नु हुदैन । यदि यस्तो गर्यो भने त्यो अपराध पनि हुन्छ र असभ्य पनि मानिन्छ । खासमा म भित्रभित्रै डराइ डराइ भनिरहेको थिए । के थाह मुर्खस्या ठिंगा बलम् ! तर केटाले कुरा बुझेछन् र भनेको माने ।
गतसाल त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रय विमान स्थलको प्रस्थान कक्षमा लाइनमा बसेको बेलाको कुरो हो यो । त्यहाँका कर्मचारीको व्यवहार अनुसार त गर्नु पर्ने त त्यस्तै हो तर मैले जानेको र बुझेको मैले गरें ।
त्यसपछि तलको प्रतिक्षालयमा गएर बसियो करीब आधा घण्टा पछि प्रतिक्षालयको ढोका खुल्यो र माइकमा भनियो प्लेन वोर्डिङ हुदैछ भनेर । त्यसपछि त बाबा ठाकुरे गोर्खाली साथीहरु त लडाइँ लड्नै कुदे जस्तो तछाडमछाड गरि तान्द्राड र तुन्द्रुङ झोला झुन्ड्याउँदै धिसार्दै उही ठेलमठेल गर्दै प्लेनमा उक्लिन लागे । रत्नपार्क लाइनको साझा बसमा चढ्ने दृष्य जस्तो थियो गल्फ एयरको त्यो प्लेनमा चढ्ने बेलाको दृष्य ! प्लेनको तल गेटमा बसेकाले चिच्याउँदै भने "ए भेडा बाख्रा जस्तो नगर ए पशुहरु जस्ता, लाइनमा बस् ।" मलाई उसँग पनि झोक नचलेको हैन तर के गर्नु चुपचाप रहे र सोचे - राम्रोसँग भनेको भए पनि त हु्न्थो नि ! अनि मनमनै विचार गरे दोष यि चढ्नेको पनि हैन र त्यो गेटमा बसेर भेडाबाख्रा भन्दै गाली गर्नेको पनि हैन । दोष हो यो देशको नीति, नियम र कानुनको ! दोष हो जिम्मेवार तर जिम्मेवार विहिन सरकारी अधिकारीहरुको र मेनपावर खोलेर बसेका मानव दलालहरुको । कहिल्यै प्लेन नचढेका, कहिल्यै विदेश नगएका सामान्य लेखपढमात्र गर्न सक्ने यस्ता अर्धशिक्षित नेपाली श्रमिकहरुलाई कमसेकम ति चोट्टा मेनपावर क‌ंपनी अर्थात सरकारले कम्तिमा ‍दूइचार घण्टाको ओरिन्टेशन क्लास पनि दिन सक्थे । अरु केही नभए नि प्लेन यसरी चढ्नु पर्छ । लाइनमा यसरी बस्नु पर्छ । प्लेनभित्र यस्तोयस्तो हुन्छ । ओर्लदा यसरी ओर्लनु पर्छ । आदि सामान्य कुराहरु ।
प्लेन उडेको करीब एक घण्टा पछि बाथरुममा छिरेको थिएँ । छिर्न पाएको छैन ढोका ढ्याङ्ढ्याङ् पार्न थाल्यो । म त एकाएक आत्तिए पनि । लौ प्लेनमा गडबडी भएर केही इमरजेन्सी परेछ कि क्या हो भन्ठानेर हत्त न पत्त ढोका खोलेको त उही हाम्रा गोर्खाली भाइहरु मध्येका एक भाइ पो ढोकामा ठिङ्ग उभिइरहेको ! के भो भाइ भनेर साधे, उनले भने - पिसाब लागेर फुट्ला जस्तो भयो । मैले उनलाई बाथरुम प्रयोग गर्न दिए र उनी निस्किएपछि भित्र पस्छु त आधा भूइँमा आधा ठाउँमा ! फ्लस गर्ने त कुरै छोडौ‌ !
हे ‍भगवान् भन्ठाने र फेरी सोचे यो दोष यिनीहरुको हैन यो दोष सरकार र मेनपावार कंपनीहरुको हो । यिनीहरुले परदेशमा नेपालको धज्जी यसरी पनि उडाइहरेका छन् ।
Basanta GautamApril 2, 2009 at 9:17 PMहा हा हा! कटु यथार्थको रमाईलो प्रस्तुति राख्नुभयो।अलिक सभ्यता, बानीबेहोर नसिकाई नेपालीलाई पासपोर्टनै दिनुहुन्न जस्तो लाग्छ मलाई त१ReplyDeleteआकारApril 2, 2009 at 9:34 PMहाँस्नु त नहुने, यसप्रकार को कसैको बुद्धि माथि ! तर पनि हाँसो उठ्यो ।नजाने पछि, के गर्नु त ? जिवनमै पहिलो पल्ट प्लेन मा छिर्दैछन्, जिवनमै पहिलो पल्ट कहिँ बाहिर जाँदै छन् । त्यस्तै अन्यौल छ, के गर्ने केहि थाहा हुँदैन् । उनीहरुलाई असभ्य र जंगली भनेर व्यवहार गर्नुभन्दा, जानेका र बुझेकाले सिकाउँदा निकै राम्रो हुनेथियो । अन्यथा, त्यो थाहा पाउने, जान्ने बुझ्नेले पनि के नै गर्‍यो र ??? कस्ता असभ्यरहेछन् भनेर, कुरा गरियो सकियो, सायद त्यसपछि पनि यसरी फ्लस गर्नुपर्छ भनेर भनिएन होला, उसलाई ! यस्तै छ नेपाली को चाल !ReplyDeletePrabesh Poudel "उजेली"April 2, 2009 at 9:58 PMहा हा !! बडा रमाइलो लाग्यो पढ्न चैँ तर हाम्रो देशको ताल र उत्तरदायित्व पूरा गर्नुपर्नेले नगरेको देखेर दु:ख पनि !ReplyDeleteसुलभ [Sulabh]April 7, 2009 at 11:48 PMराम्रो प्रस्तुति. सोचनीय बिषय |- सुलभ ReplyDeleteमिलनApril 8, 2009 at 5:59 PMहो नि हामीले सिकेको संस्कार नै यस्तो छ ..ति बिचाराको के गल्ती ?ReplyDeleteदूर्जेय चेतनाApril 9, 2009 at 7:11 AMमलाई यसमा केही भन्नु छ। हामी मात्र हैन यो मनिसै पिछ्य फरक हुने कुरा हो। गत बर्ष अमेरिकाको भर्मणको बेला ब्रमाण्ड्कै सर्बोतम नगरिक भनी टोपल्ने एक जना अमेरिकनले रक्सीको तालमा प्लैनको ढोका बहिरैबाट दिएको पनि देखेको छु।ReplyDeleteबेदनाथ पुलामी ( उमेश )April 12, 2009 at 7:09 AMnikai majjako ... laagyo ...स्वतन्त्र सिर्जनामा रम्न पाइयोस र नेपालको प्रगतिका कुराहरु टासोको रूपमा टास्न पाइयोस भन्दैनया बर्ष 2066 को उपलक्षमा -यहाँ लगायत सम्पूर्ण ब्लगर मित्रहरुलाई म हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु । धन्याबाद !ReplyDeletenijgadh (pralad)May 8, 2009 at 2:27 AMनिकै राम्रो लाग्यो रमाइलो छ है keep it up blogginggggggggReplyDeleteAdd commentLoad more...